Brexit na-eme ka Apple bulie ọnụ ahịa ya na United Kingdom site na 25% | Esi m mac
Brexit na-amanye Apple ka o bulie ego ya na United Kingdom site na 25%
Ọ bụ Javier Labrador | | Apple
Ebe ọ bụ na anyị mụtara banyere mkpebi nke ndị bi na United Kingdom mgbe referendum gara aga nke afọ ebe ha tozuru oke ịhapụ European Union, anyị maara na obere obere mmekọrịta mmadụ na ibe ya na akụ na ụba ga-abata. Ma ọ bụ na, mgbe Brexit, Apple amanyewo igbalite ụtụ, maka oge, nke oflọ Ahịa App.
Nke a bụ nzaghachi nke ụlọ ọrụ North America n'ihi mbelata nke ego obodo, paụnd, ata ahụhụ kemgbe referendum ahụ. Apple ekpebiela dị ka nke taa bulie ego nke ngwa site 25%. Ọmụmaatụ, ngwa rue taa na-efu £ 0.79, site ugbu a na ọnụahịa ga-abawanye na £ 0.99.
Mbuli a, nke a na-akọ taa, na-emetụta mba abụọ ọzọ, India na Turkey, ọ bụ ezie na United Kingdom ọ bụ ebe a hụrụ mmụba kachasị dị mkpaỌ bụkwa otu n’ime ahịa ndị kachasị mkpa maka Apple na Europe.
Maka ugbu a, Apple na-elekwasị anya naanị n'ịwelite ọnụahịa nke ngwa na Storelọ Ahịa App. Agbanyeghị, n'agbanyeghịkwa na ọnwa Ọktọba nke afọ gara aga, mmụba na ọnụ ahịa na ngwaọrụ Apple, nke a na-eme ka anyị chee na ngwaike nke ụlọ ọrụ nwere ike bụrụ na usoro a nwere ike ịmetụta, na-enwe Macs, iPads na iPhones karịa ọnụ karịa oge a afọ.
N'oge a, ọ bụ naanị ndị mmepe nke nyiwe iOS na Mac App Store na-agwa ndị ụlọ ọrụ Cupertino na-agwa ha. O sina dị, nbudata a gha etinye aka na okike iTunes na nso nso.
Ndị ụlọ ọrụ Californian anaghị akọwapụta Brexit nke ọma dị ka isi ihe kpatara mmụba ọnụahịa ahụ nke ahụ na-eme na mba ndị a. Agbanyeghị, ọ bụghị ụlọ ọrụ izizi mebere ụdị mmụba a iji mebe azụmaahịa na-adigide. Ugbua afọ gara aga, ụlọ ọrụ dịka OnePlus, Tesla ma ọ bụ HTC welitere ọnụahịa na nzaghachi ngwa ngwa nke paụnd na British Isles.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Brexit na-amanye Apple ka o bulie ego ya na United Kingdom site na 25%
Palo Alto Apple Store iji mechie mmebi fa closeade
ING Direct dị otu nzọ site na ịkwado Apple Pay na Australia